Fone De Ouvido Conectado Apk Khuphela For Android [Isixhobo] - Luso Gamer
Mhlawumbi usebenzisa i-smartphone yamva nje okanye yakudala ye-Android. Ngequbuliso uqala ukufumana ingxaki nge-headset kunye nemowudi yesithethi esingagqibekanga. Kuba ezo ngcali zizise esi sicelo esimangalisayo se-Android esibizwa ngokuba yi-Fone De Ouvido Conectado Apk.
Kwiimeko ezinkulu, abasebenzisi be-smartphone banokufumana imiba ethile ngesandi ngelixa besebenzisa ifowuni. Le ngxaki inokwenzeka ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Esona sizathu singalindelekanga esenza ingxaki enkulu enjalo kungenxa yokusilela kwehardware kunye nokuwa kwesoftware.
Kwimeko enjalo, iingcali zangaphambili zincoma ukuba abasebenzisi baqale kwakhona ii-smartphones zabo. Kwaye ingxaki iya kusonjululwa ngokuzenzekelayo. Enyanisweni, ingxaki inokuqhubeka kwaye abasebenzisi babhideke. Kungoko siqwalasela umba apha sinikezela ngeFone De Ouvido Conectado App.
Yintoni i-Fone De Ouvido Conectado Apk
Fone De Ouvido Conectado Apk ithathwa njengesona sisombululo sikhawulezayo. Oko kwenza abasebenzisi be-smartphone ukuba babandakanyeke kwingxaki kwaye basuse ngokulula ibug enxulumene nesandi. Ukuba ufumana ingxaki efanayo ke kungcono ufake isixhobo kuqala.
Ukuza kuthi ga ngalo mzuzu asikwazi ukubona izixhobo ezifanayo zomsebenzi othile. Nangona kunjalo ngokuqwalasela abaqhubi be-smartphone be-Android, abaphuhlisi ekugqibeleni bazisa isixhobo esifanelekileyo. Oko kufumaneka simahla kwaye akufuni mrhumo.
Xa siphonononga isicelo ngokufutshane sifumene silula kwaye sityebile ekusebenzeni okusisiseko. Olona kongeza lubalulekileyo oluya kuthandwa ngabasebenzisi befowuni yideshibhodi eneenkcukacha. Ngaphakathi kwideshibhodi ephambili, lo mhlalutyi uphilayo uyongezwa.
Ngaphezulu kokucofa iqhosha lokuhamba kuya kunceda ekujongeni imisebenzi esisiseko. Emva koko iya kubonisa ngokuzenzekelayo iziphumo ezithathiweyo. Ukusebenzisa imisebenzi yezandla, abasebenzisi banokuvula ngokulula kwaye bakhubaze iinketho ezininzi ezinxulumene nesandi.
igama Fone De Ouvido Conectado
ubungakanani 7.3 MB
Igama lepakheji com.techmindindia.earphonemodeoffon
Yiyo loo nto uyazithanda iimpawu zepro ezinikezelwa yifayile ye-app kubaqhubi be-android. Kwaye ukulungele ukusebenzisa ithuba. Emva koko faka inguqulelo yamva nje yeFone De Ouvido Conectado Khuphela ekhutshelwayo ngokucofa okukodwa.
Khumbula ukuba akukho zikhetho zokurhuma ngokuthe ngqo zikhoyo. Nangona kunjalo, inokuxhasa iintengiso zomntu wesithathu ezinokuvela kwiscreen. Ezi ntengiso azitshintsheki kwaye akukho khetho oluthe ngqo lufikelelekayo ukucima ezi ntengiso.
Isixhobo sokujonga uhlaziyo oluzenzekelayo longezwa ngaphakathi kwisicelo. Ngoku abasebenzisi akufuneki bajonge uhlaziyo ngesandla. Inketho ethile iya kujonga ngokuzenzekelayo uhlaziyo oluqhelekileyo. Ngaphezu koko, ukuba uhlaziyo lufikile ke luya kufaka uhlaziyo ngokuzenzekelayo.
Ngaphambili uninzi lwezinye izixhobo ezifanayo zaye zacwangciswa kwaye zakhululwa kwintengiso. Kodwa uninzi lwezo software zifikelelekayo zazinxulumene neekhompyuter kunye nezinye izixhobo ze-OS. Ukanti abaphuhlisi ekugqibeleni bazise isixhobo se-android kubasebenzisi be-smartphone.
Khumbula ukuba le ngxaki yokuhambelana nesandi ithathwa njengento eqhelekileyo. Ukuba ufumana ingxaki efanayo kunye ne-smartphone yakho ye-Android. Emva koko ungaze uzame ukutshintsha i-headset pin port, khuphela nje i-Fone De Ouvido Conectado Android kwaye ukonwabele ukutshintsha isandi ngesandla.
Ukufakela isixhobo kunika imisebenzi eyahlukeneyo.
Ezo ziquka i-Dial Pad ephilayo, i-Sound Tester kunye nokuSetha kwakhona iKhetho.
I-customer ephilayo ikwakhona ekuguquleni isithethi kunye neendlela ze-headset.
I-interface ye-App ibonakala ilula.
Uyikhuphela njani iFone De Ouvido Conectado Apk
Okwangoku, usetyenziso luyafikeleleka ukuba lukhutshelwe kwiVenkile yePlay. Nangona kunjalo, ngenxa yeminye imiba ephambili, ayifikeleleki kwabanye abasebenzisi be-Android. Isizathu sokungafikeleleki kubangelwa ukuhambelana kwe-Android OS kunye nengxaki yeNkxaso.
Oku kuthetha ukuba abaqhubi be-smartphone abadala abanakuze bavumele ukufikelela kwiifayile ze-Apk. Ngoko bafanele benze ntoni abo bakwimeko enjalo? Yiyo loo nto ubambekile kwaye ubhidekile ke undwendwele iwebhusayithi yethu kwaye ukhuphele ngokulula ifayile ye-apk ehlaziyiweyo simahla ngaphandle kwemvume.
Sele sisifakile isixhobo kwii-smartphones ezahlukeneyo. Emva kokufaka isicelo, asifumananga ngxaki ngqo ngaphakathi. Ke ngoko abaqhubi be-smartphone banokukhuphela ngokulula kwaye bafake usetyenziso ngaphandle kokukhathazeka.
Ukuza kuthi ga ngoku uninzi lwezinye izixhobo zokunceda zipapashwa kwaye kwabelwana ngazo apha kwiwebhusayithi yethu. Ukujonga ezinye izixhobo ezihambelanayo nceda ulandele usetyenziso. Ezizi Widgetopia Apk kwaye Umshicileli MP3 Apk.
Ukuba ufumana ingxaki yokutshintsha iSomlomo kunye nemowudi ye-Headset. Kwaye ukucinga ngokutshintsha i-pin port ukusombulula umba. Emva koko kunqande ukutshintsha i-pin port kwaye ufake i-Fone De Ouvido Conectado Apk. Okuya kunceda ukusombulula ingxaki ethile ngokulula.
iindidi izixhobo, apps tags Fone De Ouvido Conectado Android, Fone De Ouvido Conectado Apk, Fone De Ouvido Conectado App, Fone De Ouvido Conectado Download Post yokukhangela